Sezvo inozivikanwa nenguvo yezvigadzirwa zvemabhizimisi, MH yave ichiita zvigadzirwa zvemavara kweZ16 makore, uye yakatsvakurudza kutsvakurudza nzira yekuderedza kushandiswa kwekugadzirwa kwemhepo inosvibisa, yakashandirwa kuvaka maharareji ekurapa maharareji, kuisa pachena kuti firati yemvura yakasvibiswa uye inosungira zvose inosangana nemagariro ezvakatipoteredza . MuChNUMX MH zvakare yakatanga kupisa dope, kushandiswa kwepolyester, cationic yakagadziriswa polyester, uye Better-Cotton-Initiative mavara mana emagetsi ezvisikwa zvezvinhu zvakasikwa, zvichibva pane zvigadzirwa zvekushandisa michero yakawanda.
MH akamisa "Xiao dou ya" Scholarship Fund kubatsira vana vari mumusha wakashata kuti vapedze kudzidza kwavo. MH
rakabhadharwa nevana 7 varombo kwemakore gumi.
Zvose zhizha, Mh vanozvipira vanotumira chipo chinotonhora kune vashandi vekuchenesa uye mapurisa emigwagwa.
MH inotsigira "zvipfeko zvekupfeka" basa uye yakapiwa pamusoro pe10,000pcs zvipfeko kune varombo musha muGuizhou, Yunnan
uye dzimwe nzvimbo dzine urombo.
MH yakagadzira "MH Weekly" pepanhau rekugadzirwa kwekombiyuta, MH APP nemamwe mapurisa ekukurukurirana kuti aparidze tsika dzeMh.